Ny tena mahatonga ny fixture diso in CNC lathe asa
Ny tena mahatonga ny fixture diso in CNC lathe asa tena mahatonga ny fixture diso tao amin'ny fiasan'ny CNC lathes dia ny orinasa mpamokatra entana fametrahana mazava tsara ny tsirairay fixture singa dia tsy avo, ny fametrahana marina dia tsy ny hahavony, ary ny anaovan'ireo ny fixture nandritra ny fampiasana no sarona. Fixture erro ...Lire la suite »
CNC lathe rafitra fikojakojana servo fahana olana
1.1 Overtravel rehefa mihetsika ny fahana mihoatra ny fetran'ny rindrambaiko napetraky ny rindrankajy na ny fitaovana voafetra tapa-kevitra ny fetra jiro, ny overtravel fanairana hitranga, ary afa-po ny fanairana dia aseho eo amin'ny CRT. Araka ny rafitra CNC boky, ny fahadisoana azo intsony. , Hampitraka ny ...Lire la suite »
Common fahadisoana in CNC machining servo rafitra foibe
Common fahadisoana in CNC machining servo afovoany rafitra Araka ny fantatry, ny machining servo rafitra foibe dia rafitra izay manome hery ny milina fitaovana. Raha tsy misy ny servo machining rafitra foibe, ny workpiece tsy azo tsinjaraina. Noho izany, ny rafitra servo no tena zava-dehibe ao amin'ny machining taona ...Lire la suite »
Voalohany, ny machining vy faritra ao CNC machining toerana tsara ho an'ny lalamby sarotra na tsara ho an'ny lalamby. Iron faritra dia somary iombonana workpieces. Maro ny mpanjifa no manontany raha ny machining foibe dia tsy ampiasaina ao amin'ny foibe machining ny fandraisana ny ampahany vy. Ve ny "Cnc machining foibe ...Lire la suite »
Inona no banga Chuck ny CNC machining foibe?
1. Inona no CNC vacuum Chuck? Vacuum suction kaopy, izay antsoina koa hoe vacuum spreaders, dia iray amin'ireo actuators banga. Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana ny vacuum chucks mba haka lahatsoratra dia iray amin'ireo fomba mora indrindra. Vacuum chucks dia misy amin'ny fomba isan-karazany. Suction kaopy vita amin'ny fingotra mety ho ...Lire la suite »